Eke pigmenti na -abụ nhọrọ izizi maka capsules osisi nwere agba?
Agba nri bụ ihe na -acha agba na mgbakwunye nri. Enwere echiche dị iche iche na ụlọ ọrụ gbasara ntụnyere n'etiti ụcha eke na eke sịntetik. Ihe na -esonụ bụ ntụnyere uru na ọghọm nke ihe ndị sitere n'okike na ụcha sịntetik: Uru nke ...
Ntụnyere ngwa nke capsules osisi na capsules oghere
1. A na -eji Hydroxypropyl methylcellulose dị ka onye na -ahụ maka ọgwụ, a na -ejikwa ya ebe niile dị ka ihe nrachi mbadamba na onye na -ahụ maka mkpuchi sel. A na -a withụ ya n'ọtụtụ ọgwụ, ọ nweghịkwa ntụkwasị obi. 2. Hydroxypropyl methylcellulose bụ kemịkal kwụsiri ike, anaghị eji ikuku na mmiri eme ihe na kemịkal, yana sel ...
A na -ekewa capsules siri ike na capsules gelatin na capsules akwụkwọ nri dị ka akụrụngwa dị iche iche si dị. Gelatin capsules bụ capsules nwere akụkụ abụọ kacha ewu ewu ugbu a n'ụwa. Isi ihe mejupụtara bụ gelatin ọgwụ dị elu. A na -eme capsules akwukwo nri site na akwukwo nri c ...